स्टीभ जब्सले हस्ताक्षर गरेको ‘एप्पल टू’को म्यानुअल साढे ९ करोडमा बिक्यो - नेपाल एक्सन Online News Nepal
Homeसूचना-प्रविधिस्टीभ जब्सले हस्ताक्षर गरेको ‘एप्पल टू’को म्यानुअल साढे ९ करोडमा बिक्यो
स्टीभ जब्सले हस्ताक्षर गरेको ‘एप्पल टू’को म्यानुअल साढे ९ करोडमा बिक्यो
By नेपाल एक्सन
काठमाडौं । संसारकै मूल्यवान ब्राण्डको रुपमा रहेको एप्पल कम्पनीका संस्थापक स्टीभ जब्सले सन् १९७३ मा जागिरका लागि दिएको दरखास्त गत महीना झण्डै ४ करोड रुपैयाँमा विक्री भएको थियो ।
जागिरको लागि दरखास्त हाल्ने बेलामा स्टीभ जब्स १८ वर्षका थिए र दरखास्तको निवेदनमा उनी आफैले दस्तखत गरेका थिए । यसबाट स्टीभ जब्सका जुनसुकै चिजहरु पनि कति मूल्यवान तथा महत्वपूर्ण छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । त्यहीँ कुरालाई पुनर्पुष्टि गर्दै हालै स्टीभ जब्सको हस्ताक्षर रहेको एउटा कम्प्युटर म्यानुअल झण्डै नौ करोड रुपैयाँ बराबरको मूल्यमा विक्री भएको छ ।
सन् १९८० मा स्टीभ जब्सले दस्तखत गरेको एप्पल टू कम्प्युटरको म्यानुअल ७ लाख ८७ हजार ४८४ अमेरिकी डलरमा हालै लिलाम भएको हो । गत अगष्ट १९ मा लिलाम भएको उक्त म्यानुअल जिम इर्शे नामक व्यक्तिले किनेका छन् । जिम इर्शे अमेरिकी फुटबल टिम इन्डियानपोलिस कोल्ट्सका मालिक हुन् ।
अमेरिकाको बोस्टनस्थित लिलामी घर आर आर अक्सनले स्टीभ जब्स हस्ताक्षरित उक्त एप्पल टू को म्यानुअल लिलामी गरेको हो । उक्त म्यानुअल १ सय ९६ पन्नाको छ । त्यसको विषयसूचि भएको पेजमा स्टीभ जब्सले हस्ताक्षर गरेका छन् । स्टीभ जब्सका अलावा उक्त पन्नामा एप्पलका पूर्व लगानीकर्ता माइक मार्कुलाको पनि हस्ताक्षर छ ।
स्टीभ जब्सले हस्ताक्षरसँग त्यहाँ लेखेका छन्, ‘जुलियन, कम्प्युटरसँगै हुर्कने तपाइँको पुस्ता पहिलो पुस्ता हुनेछ । जाऊ, दुनिया बदल ।’
स्मरण रहोस् जुलियन ब्रेवरका पिता माइकलले सन् १९७९ मा बेलायतमा एप्पलका कम्प्युटर वितरण गर्ने लाइसेन्सका लागि कुराकानी गरेका थिए । जुलियन त्यसबेला बच्चै थिए ।
जुलियनले आर आर अक्सनलाई बताए अनुसार उनी आफ्नो बेडरुममा एप्प्ल टू मा गेमको कोड लेखिरहेका थिए । त्यहीबेला उनका बुवाले भने, ‘आऊ एकजना पाहुनासँग भेट ।’ ती पाहुना वास्तवमा स्टीभ जब्स नै थिए । उनको घरमा आएको बेला जब्सले उक्त एप्पल टू को म्यानुअलमा सन्देश लेखेर हस्ताक्षर गरेका थिए ।
Previous articleप्रचण्डलाई साइजमा ल्याउन हिन्दु राष्ट्रकाे मुद्दा अगाडि बढाउदै पुर्व प्रधानसेनापति कटवाल
Next articleहिन्दू मन्दिरमाथि भएको तोडफोडका विषयमा प्रधानमन्त्री इमरान खानको गम्भीर ध्यानाकर्षण
९७४ मा आधारित जीएसएम सिम बिक्रीमा टेलिकमलाई रोक
अनुमतिविना नयाँ नम्बर रेन्ज प्रयोग नगर्न टेलिकमलाई निर्देशन
अन्तरिक्षमा कसरी बित्छ यात्रीको दैनिकी ?
एमाले अध्यक्षमा केपी ओली भारी मतले विजयी
कांग्रेसको ५७ जिल्लामा सभापति चुनिए, कुन जिल्लामा कुन पक्षका ?
एमाले महाधिवेशन : मतगणना सुरू
चीनद्वारा युगान्डाको एकमात्र अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल कब्जामा , अन्य देशहरूले लिएको ऋण तिर्न नसके दयनीय अवस्था हुने संकेत